Xog: Maxay isku qabteen Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Xoghayaha Joogtadda ah ee Wasaaradda,? – Hornafrik Media Network
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Somalia, Cabdi Faarax Juxaa ayaa Shalay soo saaray Warqad aysan ku qornayn Sababo Macquul oo Shaqadda looga joojinayo Xoghayaha Joogtadda ah ee Wasaaradaasi. Wuxuuna ku eedeeyay tixgalin la’aan IWM, Balse Wasiir Ku Xigeenka iyo Wasiiru Dawlaha Gudaha ayaa Saacad kadib amarka Wasiirka soo saaray iyaguna Qoraalo kale oo ay ku tilmaamayaan inay sharci darro tahay Shaqo Joojinta uu sameeyay Wasiirku, iyo Magacaabista Xoghayaha Joogtadda ah ee KMG ah.
Khilaafka ka dhex dhashay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa gaaray inay soo faragaliyaan Madaxda ugu saraysa Dalka, iyadoona lagu dhaliilay Wasiir Juxaa inuusan la tashi ka samayn go’aanka Shaqo Joojinta Xoghayaha Joogtadda ah oo uu iskiis u qaatay.
Hadda Maxay isku qabteen Xoghaaya Joogtadda ah iyo Wasiirka,?
Hornafrik waxay dabagal ku samaysay Eedaymaha uu jeediyay Wasiirka Gudaha iyo waxa keenay in Shaqadda laga joojiyo Xoghayaha Joogtadda ah, Waxaan Xogta aan helnay aan ku ogaanay in Eedayamah ku qoran Warqadda Wasiirka inay dhamaantood yihiin kuwo aan waxba ka jirin ee waxa la isku haysto ay ka duwan tahay arrintaasi.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Xoghayaha Joogtadda ah waxay isku qabteen billowgii Khilaafkooda Hindiso Sharciyeedyo ay Wasaaraddu gacanta ku hayso oo ay ka mid yihiin Sharciga Jinsiyadaha, Sharciga Doorashooyinka, Guddiyadda Madaxa Banaan sida Guddiga Doorashooyinka oo uu doonayay Wasiirku in Xubno uu isagu wato lagu daro Guddi horay u dhisnaa, Dhismaha Golayaasha Dawladda Hoose, kala xadaynta Awoodaha Dawladda Dhexe iyo Dawlad Goboleedyadda Xubnaha ka ah. iyo Shaqaalaysiinta Dhalinyaro oo keensaday Wasiirku.
Sharciyadan ay Wasaaraddu gacanta ku hayso waxa uu Wasiirku ku xiray in marka hore uu Yaxye geeyo Puntland, halkaasna ay iskula soo saxaan Wasaarada Gudaha Puntland, taasoo uu Xoghayaha Joogtadda ah ka biyo diiday, Waxa uu sidoo kale ku amray in 4 qof Xilal muhiim ah looga dhiibo Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka, taasoo uu Xoghayaha Joogtadda ah u sheegay Wasiirka in Guddigan horay loo dhamaystiray Dhismihiisa, haddii wax laga badalayana aysan isaga ahayn wax uu u iskiis u samayn karo.
Hornafrik waxay sidoo kale ogaatay in Khilaafka uu sii xumaaday Toddobaadkii hore markii Wasiirku uu u yeeray Xoghayaha Joogtadda ah una sheegay inuu Guddiga Shaqaalaha Rayidka ah u gudbiyo 16 Qof oo uu ku soo biiriyay Wasiirku Shaqada markii la magacaabay, balse Prof Yaxye waxa uu isku dayay Wasiirka inuu ku qanciyo inay jiraan Dhalinyaro waqti badan soo joogay Wasaaradda oo ay tahay inay iyagu helaan Mudnaanta 1-aad ee Shaqaalaysiinta, taasoo Wasiirku uu si wayn uga carooday, kadibna isla goobta ugu sheegay inuu Shaqada ka joojiyay, taasoo uu Prof Yaxe u sheegay inay tahay inuu Sifo Sharci ah u soo maro.
Yaa ka qaadi kara Xoghayaha Joogtadda ah Xilka,?
Xoghayaha Joogtadda ah iyo Agaasimaha Guud waa Xilalka ugu sareeyay Shaqaalaha Wasaaradaha marka laga reebo Wasiirka, Ku Xigeenka, iyo Wasiiru Dawlaha oo aan iyagu ka mid ahayn Shaqaalaha Dawladda ee ku yimid hanaan Siyaasadeed, Waxaana Xoghayaha Joogtadda ah marka la magacaabayo la hor geeyaa Shirka Golaha Wasiiradda, kadibna marka ay Wasiiraddu akhristaan Taariikhdiisa ayeey cod 1 dheeri ah ku ansixiyaan. Waxaana marka ay Golaha Wasiiraddu ansixiyaan loo gudbiyaa Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somalia oo ku soo saaraya Wareegto, sidaas si la mid ah ayaana Xilka looga qaadi karaa Xoghayaha Joogtadda ah.
Wasiirku Shaqada ma ka joojin karaa Xoghayaha ,?
sida ku cad Xeerka Shaqaalaha Rayidka ah Wasiirku kama joojin karo Shaqada Xoghayaha Joogtadda ah oo ah Qofka ugu sareeya Shaqaalaha Rayidka ah, Wuxuuna u gudbinayaa haddii ay jirto Cabasho Raiisul Wasaaraha oo haddii uu ku qanco Cabashadaasi ay tahay inuu tallaabo qaado. Mana jirto meel ay ku cadahay in Wasiirku uu tallaabo ka qaadi karo Qofka ugu sareeya Hab Maamulka Wasaaradda,